Nhau - China yave mugadziri mukuru wenguo uye mutengesi
Kubva zvakawanikwa China kuWTO, machira uye mbatya zvave chikamu chakakosha chekuburitsa China. Mumakore gumi apfuura, nekudzimiswa zvishoma nezvishoma kwequotout system, zvipfeko zveChina, machira uye mbatya kunze kwenyika zvine nharaunda yakasununguka yekunze. Yakanaka yekunze nharaunda zvinhu zvinopa zvakanyanya kukosha mamiriro ekudyidzana kwenyika kweChina yezvipfeko indasitiri. Pamusoro peichi, China yemachira uye yezvipfeko indasitiri ine vashandi mutengo uye mbishi zvinhu zvekugovera zvakanakira, zvinowedzera kuvandudza kukwikwidzana kwepasi rose. Kubva China payakabatana neWTO muna 2001, huwandu hwekunze hwekutengesa machira uye mbatya dzeChina zvakawedzera kanopfuura kana. Parizvino, China yakave inogadzira zvipfeko uye mutengesi kunze kwenyika.
Sekureva kwetsika dhata, mu2019, kuChina kwese kutengesa kunze kwemachira uye zvipfeko kwakasvika US $ 271.836 bhiriyoni, kudzikira kwegore-pagore kwe1.89%. Pakati pavo, huwandu hwekunze hwekutengesa machira hwaive US $ 120.269 bhiriyoni, ichikwira 0.91% gore-ne-gore. Zvipfeko kunze kwenyika zvakazara US $ 151.367 bhiriyoni, zvichidzika 4.00% gore-ne-gore. Nyika huru dzekunze dzemicheka uye zvipfeko iJapan neChina.
Kubva pakuona kwekutengeswa kwezvinhu zvekutengesa kunze kwenyika, zvipfeko zvekutengesa kunze kwenyika mu2019 zvakaunganidza 151.367 bhiriyoni emadhora ekuAmerica, ayo machira ekuruka aive 60.6 bhiriyoni emadhora ekuUS, kuderera kwegore-ne-gore kwe3.37%; zvipfeko zvakarukwa zvaive 64.047 bhiriyoni emadhora ekuUS, gore-gore-gore kuderera kwe6,69%.
Cao Jiachang, Mutungamiri weChina Textile Import uye Export Chamber of Commerce, akadaro pa "2020 8th China neAsia Textile International Forum" yakaitirwa muShanghai nguva pfupi yadarika, kutengeswa kwemasks uye zvipfeko zvekudzivirira zvakawedzera nekukurumidza, izvo zvakatungamira kukura kwese kwekutengesa kunze. yemachira neyekupfeka. Nekudaro, musika wepasi rose une husimbe, kudzimiswa uye kumisikidzwa kwechinyakare machira uye zvigadzirwa zvigadzirwa maodha zvakakomba, kudzoreredzwa kwemirairo mitsva kunonoka, uye tarisiro yeramangwana haina chokwadi. kupfuura denda rekudzivirira zvinhu zvicharamba zvichitarisana nemamiriro ezvinhu akashata ekuderera kwekudiwa uye kushayikwa kwemirairo.
Kubva chikamu chechipiri chegore rino, machira eChina uye mbatya kunze kwenyika zvakadzora zvishoma nezvishoma kubva muchidyiro. Zvichifambiswa nekutengeswa kwezvinhu zvinorwisa denda zvakadai semasikisi, kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu, machira eChina nemachira anotengeswa kunze anosvika US $ 187.41 bhiriyoni, kuwedzera kwe81%, ayo ekushambadzira kwemachira aive US $ 104.8 bhiriyoni, kuwedzera kwe33.4%; uye mbatya dzinotengeswa kunze kwenyika dzaive US $ 82.61 bhiriyoni, kuderera kwe12.9%.
Kunze kwenyika kwezvinhu zvekudzivirira zvakadai semasikisi uye zvipfeko zvekudzivirira zvakawedzera zvakanyanya. Sekureva kwa Cao Jiachang, China yakaburitsa masiki anosvika mabhiriyoni gumi neshanu nemazana mashanu emamiriyoni uye 1,4 mabhiriyoni ekupfeka kubva munaKurume 15 kusvika Gunyana 6, paavhareji zuva nezuva kutengeswa kwemasikisi anosvika bhiriyoni rimwe, aitsigira zvakanyanya denda repasi rose rekudzivirira nekudzivirira. Mumwedzi minomwe yekutanga yegore rino, China yakaburitsa kunze kwenyika masiki uye zvipfeko zvekudzivirira zvaive zvingangoita makumi mana emabhiriyoni emadhora ekuAmerica uye mabhiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica, zvichiteedzana, zvakapetwa kagumi panguva imwecheteyo gore rapfuura. Pamusoro pezvo, kutengeswa kwemachira asina kurukwa uye machira asina kurukwa kwakawedzera ne118%, izvo zvaive zvine chekuita nekuwedzera kwemicheka isina kurukwa kunze kwenyika.